Maamulka gobolka Benaadir oo shaaciyay xilliga la qabanayo ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka Waaberri iyo Dharkiinleey. – Radio Muqdisho
Maamulka gobolka Benaadir oo shaaciyay xilliga la qabanayo ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka Waaberri iyo Dharkiinleey.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Benaadir Basma Caamir Jakeetti oo goordhow warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in dhawaan la qabanayo kulan ciyaareedkii kama dambeysta ahaa ee degmooyinka Waaberri iyo Dharkiinleey ee gobolka Benaadir.
Kulankaan oo ahaa Finalka tartankii degmooyinka gobolka Benaadir ayaa horay ugu baaqday cilado farsamo,waxaana hada la qabanayaa 5-ta bishaan December ee 2019.
Gudoomiye Basma ayaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed eek u nool caasimada dalka in ay ka soo qeyb galaan si loo muujiyo horumarka caasimadda.
Maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka oo Muqdisho laga xusay”Sawirro”.
Wasiirka Maaliyadda XFS oo maanta hor tagay Gollaha aqalka sarre ee BFS “Sawirro”
Wasiirka Maaliyadda XFS oo maanta hor tagay Gollaha aqalka sarre ee BFS "Sawirro"